Waxaad ogaan waxba ma jiraan in carqalad ku keeni karaan fudud - sida waqtiga gaarka ah xasilloon oo nabdaysan, qado qosol ka buuxo qoyska ama xitaa kulanka guddiga xamaasad leh, laakiin ka xun sacoto, wicitaanada aan la rabin ee aad taleefan smart. Waxay ka dhigan tahay waqti aad u yar oo aad u. Ku dhawaad ​​qof kasta oo uu soo maray bidxeed in cuncun marka telefoonka waxay ag daqiiqado ugu xumaa. Taasi waa meesha Maareeyaha Call Advanced yimaadaa si aad samatabbixinta.
Qeybta 1: Waa Maxay Manager Advanced Wicitaanka 2 Qaybta: Top 5 Manager Advanced Call for Apps Android Qeybta 3: Waa kuwee Manager Android Call App Aad Sameyn Like Most Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager Call for Android
Qeybta 1: Waa Maxay Manager Call Advanced ah
Tababare Sare Call waa codsi loo naqshadeeyey loona sameeyey qaraha Mobile kuu ogolaanaya in aad in ay la tacaalaan taleefan oo aad hab ku haboon shuruudaha aad. Iyada oo tirada cajiib ah wicitaanka taabato muuqaalada iyo personalizing fursadaha aad heli karto, Manager Advanced Call waa codsi farsamo adag u Symbian iyo Nokia. Waxay ku siisaa xoriyad ah si ay u go'aamiyaan ku baaqay in aad rabto in aad ka qeyb oo awood u leh inay soo diro jawaabaha qofka soo wacaya kala duwan.
Features ee Manager Advanced Call
* Waxaad si fudud u la ringer ah la qariyaa ha ku baaqay in la soo dhex maro. Sidaas, idiin jawaabi maayo giraanta; waxaad xoogga saari kara shaqadaada, oo aan danbi ka dareemin iska indha baaqa
* Waxaad soo wacaya diri karaa mid mashquul ah.
* Waxa intaa dheer in diraya qarsan mashquul ku soo wacaya aad, waxa kale oo aad ku diri kartaa in jawaab shakhsi iyaga.
* Waxaad dooran kartaa in ay u gudbinayaan wacay marka aad awoodi karin in ay ka qayb galaan iyaga.
* Inkastoo kaliya laga heli karaa qalabka Nokia, app Manager Advanced Call kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo telefoonka galay mashiinka u jawaabay ah. Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u qortid fariimaha aad Yeedhe ayaa si aad telefoon si aad iyaga ka fiirin kartaa firaaqada ah oo aan haysan si ay ugu yeedhaan wadaha si aad u hubiso dhamaan fariimaha codka.
* Waxaa intaa dheer, ka app Manager Advanced Call ayaa sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad kala qaybin aad xiriirka la leedahay kooxo kala duwan. All inaad samayso waa in ay si fudud u kala qaybiyaan xiriirada aad galay liiska kala duwan sida saaxiibada, qoyska, isbarteen, iyo shaqada. Waxa kale oo aad qoondeeyo kartaa xeerarka furid kala duwan ee koox kasta.
Qeybta 2: Top 5 Advanced Manager Call Apps u Android
Call Manager Smart 4.1 / 5 Free
Wac Control - Wac Blocker 4.4 / 5 Free
NQ Call Blocker 4.2 / 5 Free
Smart PRO Call Blocker 4.2 / 5 Lacag
Guard Call 3.9 / 5 Lacag
1. Maareeyaha Smart Call
Tani waa app xor ah oo waxtar u leh wicitaanada iyo maamulka SMS. Iyada oo ku xidhan buuq ku wareegsan oo lagu alkumay, codsigan isla markiiba bilaabo qabsado mugga wac si ay u yeedhataana idin ma aha seegay badan din ah. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad ka heli qaar ka mid ah muuqaalada kale sida ID dhawaaqi dhawaaqay loogu wacay, auto jawaab u baaqyo iyo SMS sida Manager Call Advanced, auto call-diido iyo akhristaha cod SMS farriimaha soo socda. Waxaa la iman shan hababka user kala duwan, hab arrin xafiiska, hab xafiiska mashquul, hab socodka gaadiidka wadada, hab Westgate iyo hab riwaayad. Waxa kale oo aad sameyn kartaa ringtones aad iyo digniino gaar ah la ringtones iyo digniinaha in app. Button An dhan-carrab aad u saamaxaaya in ay xidhi dhan ama unmute oo dhan.
Download Manager Smart Call ka Google Play Store >>
2. Wac Control - Wac Blocker
Tani app Android free kuu ogolaanaya in aad xannibi oo dhan wicitaanada aan loo baahnayn iyo fariimaha. Marka aad soo dajiyo Control ku Call, aad waa ay xakameyn ku baaqay spam awoodaan. Iyada oo aad liiska madow ee shakhsiga ah, waxaad si fudud u xannibi karaa waceen taleefan lambarrada gaarka ah iyo koodh. Waxaad xidhi karaa ringer ah, diro wacay si ay farriinta codka iyo fariimo block qoraalka iyo sawir, iyo sidoo kale diyaariyaan whitelist shakhsi sidoo kale. Waxaa kale oo gurmad ah aalad in aad dib kartaa liiska xiriirada gaarka ah.
Download Control Call - Wac Blocker ka Google Play Store >>
NQ Call Blocker taageero 6 luqadood, oo ay ku jiraan Ingiriisi, Isbaanish, Faransiis, Portugal, Jarmal iyo Shiinaha. Iyadoo app this, aad diidi kartaa calls, wicitaanada weerarka dadka kale ama idinku soo diro auto SMS. Waxa aanu xannibi ma aha oo kaliya wicitaanada spam, laakiin sidoo kale SMS spam. Muuqaalka wanaagsan ee app tani waa awood u leh inay dib liiska xiriir iyo wareejiyo xiriiro si ay u phone cusub. Waxa kale oo aad tirtiri kartaa taariikhda yeedho iyo fariimaha dadka ka si ay u ilaaliyaan gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, in la isticmaalo version joogtada ah ee caymiska, dadka ee dalalka qaar ka mid ah inay bixiyaan lacagta qaar ka mid ah, sida wadanka Maraykanka, Kanada iyo United Kingdom.
Download NQ Call Blocker ka Google Play Store >>
PRO 4. Smart Call Blocker
Smart Call Blocker waa tababare kale wac sare u Android. Waxaad u abuuri kartaa whitelist iyo madow si ay u maareeyaan baaqyo iyo SMS. Xeerarka Joojinta waxaa ka mid ah dalalka, shaqaale mobile ama tiro gaar ah. Network No maaha wax dhibaato ah si ay u isticmaalaan app this. Haddii SMS waxaa ka mid ah erayada weerar qaar ka mid ah, SMS ee la xakameeyo. Dadka aan laga yaabaa muujinta ah ee ka xanibeen dhammaan soo wacitaanada aan la garanayn ay dhacdo in wicitaanada aan la garanayn qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay. Laakiin app this sidoo kale liiska la dhammaan soo wacitaanada diiday iyo SMS.
Download Smart Call Blocker PRO ka Google Play Store >>
5. Wac Guard
Si aad u isticmaasho Guard Call, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo app in aad telefoon iyo rakibi waxaa. Download waa bilaash, laakiin si ay u isticmaalaan app this, aad leedahay si aad qori hawshooda. Tani waxay ugu baaqaysaa junk app blocks in aad soo sheegtay in ay database. Sida barnaamijyadooda kale, waxaad sidoo kale abuuri kartaa whitelist la xiriiro muhiim ah oo madow ah oo la xiriiro aadan rabin. Ka sokow, Guard Call ayaa sidoo kale blocks tirada la ID ah Yeedhe u gaar ah.
Download Guard Call ka Google Play Store >>
Qeybta 3: Waa kuwee Android Download Manager App Aad Sameyn Like Most
Qeybta 4: Sida loo maamulo Manager Call for Android
In qayb 3, waxaan wadaagaan 5 wac barnaamijyadooda Tababaraha kooxda hogaanka u Android idinla. Hadda, waxaan xilkan in ay kuu sheegaan sida loo maareeyo barnaamijyadooda ka dib waxaad kala soo bixi iyaga. Halkan, waxaan inta badan aad ku talin ah qalab dhinac saddexaad desktop - Wondershare MobileGo for Android . Waxaa aad u saamaxaaya in ay ka soo dejisan ee Chine Tababaraha Call Android ka dhisay-in Google Play ama website kasta oo app aad ku darto galeeysid bidix. Markaas, waxaad ku rakibi karo, uninstall, dhoofinta, iyo dhaqaaqo wadaagaan Chine, kuwaas oo aan ka kaaftoomi kasta.
Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan tag Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dajiyo, dhoofinta iyo uninstall barnaamijyadooda ku yaalla.
Raac talaabooyinka ay fududahay in la maareeyo barnaamijyadooda Tababaraha wac Android.
1. Dooro Windows ama Mac version of MobileGo oo ku xidh on your computer. Waxa maamula.
2. Isku telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka. la cable USB ah. Haddii aad isticmaalayso Windows computer ah, sidoo kale waxaad isku dayi kartaa xidhiidh WiFi.
3. In uu furmo suuqa hoose, u tag geeska bidixda ah ee kore oo guji Google Play. Raadi app ee Android tababare call oo iyaga loo soo dajiyo. (Oo keliya ayaa diyaar u ah version Windows)
4. Riix Apps inay soo qaadaan suuqa kala app managemnet ah. Waxaa ku taxan oo dhan barnaamijyadooda ku saabsan telefoonka Android ama kiniin.
5. Hadda, waxay bilaabaan inay maareeyaan Chine, kuwaas oo ay ku rakibidda, uninstalling, u dhaqaaqo card SD, la wadaago saaxiibada Facebook, Twitter iyo SMS.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo version Windows ah, aad u guurto karaan barnaamijyadooda si ay kaarka SD oo la wadaago.
3 Tools in SMS Android kaabta Si fudud
3 Siyaabaha kaabta Android Photos
Soo Celinta Android Phone ka kaabta faylasha
Nuqul Nokia Faylal ay si Android
Dhammaan Waxyaabaha ku saabsan Lugood U u Android
Best 5 Lugood Apps Remote ah ee Android
Best 3 Lugood Badeli kara ee Android
> Resource > Android > Waa maxay Manager Android Call qaban kartaa sidii aad u